Kugadzira podcast paLinux. Zvishandiso zvatinogona kushandisa | Linux Vakapindwa muropa
Kugadzira podcast paLinux. Zvishandiso zvatinogona kushandisa
Kufambira mberi kwetekinoroji kunoita Vashandisi vepamba vanogona kukwikwidza padanho rakaenzana (uye dzimwe nguva kukunda) nehunyanzvi hwevanopa zvemukati. Mupfungwa iyoyo, mapodcast ave imwe nzira kune anowedzera kufinha uye kushambadza-akazara echinyakare redhiyo neTV zvirongwa.
Munyaya iyi ngatiendei pamusoro pezvimwe zvishandiso zvepodcasting zvinowanikwa kuLinux.
1 Chii chinonzi podcast?
2 Kugadzira podcast paLinux. Zvimwe zvishandiso zvinobatsira
2.1 Audio podcast zvisikwa
2.2 Vhidhiyo podcast
2.2.1 Vhura pfuti
2.3 Rarama nhepfenyuro.
3 Mashoko ekupedzisira
Chii chinonzi podcast?
Podcast ine akateedzana ezvikamu (kazhinji kacho chete odhiyo, kunyange kupihwa muvhidhiyo fomati kuri kukura) uyehaina kukoshesa imwe nhaurwa kana nyaya. Podcasts anoiswa kune yekuparadzira sevhisi kune avo vanofarira vanogona kunyorera kuti vazive nguva yega yega chiitiko chitsva parinoburitswa uye chichigona kune apfuura apfuura.
Kusiyana neyakajairwa redhiyo kana terevhizheni, podcast inogona:
Iva nechero chinguva
Tumira uine huwandu hwakasiyana.
Vhara chero chinyorwa, kunyangwe hombe sei
Iva wakagadziridzwa kana kunyorwa uye usati wagadzirwa
Iva munhu asina kuroora kana uine vakawanda vatori vechikamu.
Kutanga podcast tinofanirwa kutanga na:
Fungidzira zano (kusanganisira dingindira, zita, fomati, nguva yechikamu chega chega uye periodicity muchinyorwa) Kunyangwe paine kuve nekumwe kushivirira, zvakanakisa kuve nekuenderana mukati menguva yechiitiko chimwe nechimwe munguva yekuburitswa kwechinyorwa)
Nyora tsananguro uye gadzira mufananidzo wakasarudzika.
Sarudza maitiro ekuparadzira. Kune akati wandei masevhisi, mamwe acho anosanganisira kugoverwa munzvimbo dzinozivikanwa kwazvo dzekubata
Kugadzira podcast paLinux. Zvimwe zvishandiso zvinobatsira
Audio podcast zvisikwa
Kunyangwe iyo isingatarise kunge nyanzvi, Audacity (inowanikwa munzvimbo dzinochengeterwa huru dzeLinux uye muzvitoro zveSpap uye FlatPak) ine zvese zvaunoda kana iwe uri mudzidzi kana nyanzvi. Ne Audacity Tinogona kushandisa maturu edhiyo kubva kwakasiyana masosi (kungave kwakatorwa nemidziyo yekunze yakabatana kuburikidza neUSB kana mafaera akachengetedzwa pakombuta), woagadzirisa, shandisa mhedzisiro uye woasanganisa.
Kune akawanda marudzi emaPodcast.Kana iwe uchifunga kuita imwe kwaunenge uchizoridza mimhanzi ungangonzwa kuti Audacity iri kushaya maturusi. Pakadaro unofanira kuedza Ardor. Iyo yemahara, kunyangwe ichizokumbira iwe kubatana kudiki mukusimudzira kwayo. Ardor inosanganisira maturusi ehunyanzvi ekucheka, kufambisa, kutambanudza, kuteedzera, kunama, kudzima, kuenzanisa, kucheka, crossfade, rename, snap, zoom, transpose, balance, dhonza uye kudonha kubva kune imwechete hwindo
Vhidhiyo edhitaina yeLinux kune akawanda. Iwo maviri ehunyanzvi chikamu, Da Vinci Resolve uye LightWorks vanobhadharwa. Asi Pane zvakawanda zvemahara edhita sarudzo dzinogona kushandiswa kugadzira yakanakisa vhidhiyo podcast.
Iyi vhidhiyo mupepeti iri nyore kwazvo uye nyore kushandisa. Yakabatanidzwa nemamwe maviri akavhurwa sosi zvirongwa, Blender uye Inkscape, iyo inobvumidza iyo chizvarwa chemazita uye ehupenyu mazita. Isu zvakare tine mashoma mashoma mafirita uye shanduko.
Vhura pfuti Iwe unogona kusanganisa akawanda odhiyo uye vhidhiyo makwara uye kutumira kunze kune akasiyana mafomati ekuisa kune akasiyana mavhidhiyo ekutambira masevhisi.
Pese pandinokurudzira OpenShot, mafeni e Kdenlive kundishora nekuda kwekusaisa pachinyorwa. Kdenlive ine simba kupfuura Open Shot uye haidi kuisirwa zvimwe zvirongwa. Yako yekudzidzira curve yakati omei zvishoma, asi ine bhuku rekudzidzisa rakazara. Unogona kuikanda kubva kuchitoro cheFlatPak kana muiyo KDE desktop desktop repositories.
Pachave pasina hurukuro pano. Kana iwe uchida kutepfenyura yehupenyu vhidhiyo kana odhiyo podcast, OBS Studio chishandiso chako. Unogona kushandura pakati pezvinyorwa zvemultimedia kubva kwakasiyana masosi uye woiisa kune masevhisi akadai seYouTube, Facebook kana Twitch
Chirongwa ichi chinogona kutorwa pasi kubva kuzvitoro zveSpap kana FlatPak
Kugadzira podcast haufanire kushandisa mari yakawanda. Unogona kushandisa mbozhanhare yako semaikorofoni uye kamera. Kuisa jira rerimwe ruvara pane rako rekupfeka senge kumashure unogona kuisa chroma mhedzisiro uye nekuichinjira kune chimwe chinhu chinotyisa.
Chakavanzika chebudiriro kuve nekusagadzikana uye kusagadzikana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kugadzira podcast paLinux. Zvishandiso zvatinogona kushandisa
Willy mwana akadaro
Ngatione, zvakanyanyisa pandakaverenga kuti Kdenlive ine simba kupfuura Openshot, maziso angu akabuda ropa ... uye ndakaverenga izvo kwete pano chete, asiwo zviuru zvemaforamu nemapeji ewebhu andakanyorera; Kunze kweizvozvo kana ini ndikabvunza, chii chimwe chinoda kuti mumwe asara? usandipindure…. Saka ndipo pandino gumisa kuti maKdenlive Fanboys anongozvifarira nekuti ndiyo chete yavanoshandisa ... uye havana kunetsekana nekutsvaga dzimwe nzira kuitira kuti vapindure nenharo kwete chete "o hongu, nekuti ndiyo yandinayo Ndagara ndichishandisa "Kana" imo nekuti wandinoda zvakanyanya.
Saka, ini ndinobvunza mubvunzo zvakare, kuti ndione kana mumwe munhu achindipindura nehunyanzvi: ndipe zvikonzero zvitatu (ehe, zvikonzero zvitatu chete), nei ndichifanira kusiya Openshot ndoshandisa Kdenlive. Uye ini ndinongotarisira mhinduro dzehunyanzvi, kwete chete zvido zvemunhu.
Ini ndinokupa iwe chikonzero nei ini ndichishandisa Openshot pamusoro peKdenlive: Kdenlive's interface iri kuvhiringidza, haina kujeka, ndosaka ndichida Openshot ...
Pindura Willy mwana
Ok, imwe nguva mwedzi uno ndinoita kuenzanisa
Sei usinga regedze vanhu vafunge zvavanoda nezve imwe app kana imwe? Kana paine munhu anofunga kuti chishandiso X chiri nani pane chishandiso Y, zvakanaka .. Kana iwe uchida OpenShot zvakanyanya, saka ini ndinoti kwauri: ndipe zvikonzero zvitatu nei ndichifanira kusiya KDENlive ndoshandisa imwe yacho.
Williams Fandino akadaro
Ndikasiya, zvinongondinetsa hunhu hwekuti vanhu vakaita sewe nevamwe vasingazive kupindura mubvunzo soooo yakapusa seiya yandinobvunza ...
Pindura kuna Williams Fandiño
Vashandisi vakaita seni? Kwete Williams, vashandisi vakaita sewe vanoita nharaunda dzeLinux dzakanyanya chepfu. Ini handifanirwe kukupa chero technical technical nharo, kana ini kana chero mumwe munhu. Kana iwe uri fan of OpenShot, yakakunakira iwe, idye nemapatatisi, uye rega avo vanotenda kuti KDENlive ine simba rakanyanya kuenderera nekuravira kwavo uye neruzivo rwavo.
Asi sezvo isu tiri, OpenShot hunyengeri, inogara ichindipa matambudziko, inovhara, inononoka, uye KDENlive inoshanda zvirinani kwandiri, paWindows neLinux. Nenzira, yakawanda mibvunzo asi pano ini ndakamirira ako ehunyanzvi nharo.
WINE 5.14 inosvitsa iyo Webdings font uye inopfuura mazana matatu emamwe shanduko
Xen 4.14 inouya nerutsigiro rwe stubdomain Linux, Hypervisor FS uye nezvimwe